ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ တရာသီအတှငျးအကောငျးဆုံးလူငယျကစားသမားဆုအတှကျအာဆငျနယျအသငျးရဲ့ဘယျကစားသမားတှကေမြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိနလေဲ ? - SPORTS MYANMAR
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ တရာသီအတှငျးအကောငျးဆုံးလူငယျကစားသမားဆုအတှကျအာဆငျနယျအသငျးရဲ့ဘယျကစားသမားတှကေမြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိနလေဲ ?
ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကငျြးပရေး ကျောမတီဟာ ရာသီတခု ပွီးဆုံး တိုငျး မှာ တရာသီအတှငျး အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆု၊ တရာသီအတှငျး အကောငျးဆုံးနညျးပွဆု ၊ တရာသီအတှငျး အကောငျးဆုံး သှငျးဂိုးဆု တှကေို ခြီးမွှငျ့ လရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုရာသီမှာ တော့ တရာသီအတှငျးအကောငျးဆုံး လူငယျကစားသမားဆုကို ပါစတငျပေးအပျ ခြီးမွှငျ့သှားတော့မှာလညျးဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ လူငယျအကောငျးဆုံး အတှကျ အကြုံးဝငျတဲ့ ကစားသမား တှကေတော့ အသကျ ၂၃ နှဈ နဲ့ အောကျ လူငယျကွယျပှငျ့လေးတှဖွေဈကွတယျလို့သိရပါတယျ။ ဆုရှေးခယျြရာမှာတော့ ပွငျပလူထုရဲ့ မဲပေး ရှေးခယျြမှုနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျဘောလုံးကြှမျးကငျြသူတှရေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကိုပေါငျးပွီး ပေးအပျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အသကျ အရှယျပိုငျးအရ ခှဲခွားကနျ့သတျ ခကျြတှေ ကွောငျ့ လူငယျ တှကေို နရောသိပျမပေးတတျတဲ့ အသငျးတှအေတှကျ သူတို့ရဲ့ အသငျးသားတဦးဦး ဒီဆုကို ဆှတျခူး နိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြ အတျောလေးကို နညျးပါတာဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အာဆငျနယျ အသငျးလို လူငယျတှေ ကို ယုံယုံကွညျကွညျသုံးစှဲ တတျတဲ့အသငျးမြိုးအတှကျတော့ ဒီဆုအတှကျ အကြုံးဝငျနိုငျမယျ့လူငယျတှေ အမြားအပွားရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ဒီရာသီ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ပွိုငျပှဲစုံမှာ နရော ရရှိနပွေီး စှမျးဆောငျရညျကောငျးတှပွေသနတေဲ့ ဆီဘယျလော့ဈ၊တီယာနေး၊ မိတျလနျးနိုငျးဈ၊ ဂှမျဒူဇီ၊ ဝီလော့ချ၊ စမဈ ရိုဝီ၊ ရိုငျးဈနယျဆငျ၊ မာတီနယျလီ၊ ဆာကာ အစရှိတဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့ လေးတှရေဲ့ အသကျ အရှယျ အပိုငျးအခွားက ဒီဆုအတှကျ မြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ခွှငျးခကျြပေးထားမှု အရ အခုရာသီအစပိုငျးမှာ အသကျ ၂၃ အရှယျသာရှိနသေေးတဲ့ ကစားသမားတှအေနနေဲ့ လညျးဒီဆုအတှကျ အကြုံးဝငျတယျလို့သိရပါတယျ။အာဆငျနယျအသငျးမှာတော့ ဒီစညျးမဉျြးကွောငျ့ တျောရဲယားနဲ့ ဟိုးဒငျးတို့ပါ ဒီဆုကို မြှျောလငျ့နိုငျနတောဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာ တျောရဲယားက အသကျ ၂၃နှဈအရှယျသာရှိနသေေးတာဖွဈပွီး ရာသီကုနျမှာတော့ အသကျ ၂၄နှဈရှိနမှောဖွဈပါတယျ။ဟိုးဒငျးကလညျး လကျရှိမှာ အသကျ ၂၄နှဈအရှယျ ဖွဈပမေယျ့ ရာသီအစတုနျးက အသကျ ၂၃နှဈသာရှိသေးတာဖွဈပါတယျ။
အာဆငျနယျ အသငျးသားတှကွေားမှာ ဒီဆုကို အမြှျောလငျ့နိုငျဆုံး ကစားသမား အဖွဈတော့ ကှငျးလယျကွယျပှငျ့လေး ဂှမျဒူဇီက ထိပျဆုံးမှာ ရှိနတောဖွဈပါတယျ။ဒီပွငျသဈသားလေးဟာ ဒီရာသီအာဆငျနယျအသငျးမှာခွစှေမျးအပွဆုံးကစားသမားတှထေဲကတဦးဖွဈပွီး စကျတငျဘာလအတှကျ အသငျးရဲ့ အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကိုဆှတျခူးထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။
အာဆငျနယျအတှကျသှငျးဂိုး လေးဂိုးနဲ့ ဖနျတီးမှု တကွိမျစှမျးဆောငျထားတဲ့ မာတီနယျလီ ကလညျး ဒီဆုအတှကျ မြှျောလငျ့လို့ရနတောဖွဈပမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ သှငျးဂိုး တဂိုးမှ မရထားသေးတာဖွဈပါတယျ။ဆာကာကလညျး ခွစှေမျးပွနပေမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ သှငျးဂိုးတဂိုးသာပါဝငျပတျသကျထားနိုငျနသေေးတာဖွဈပါတယျ။
ဝီလော့ချကလညျး အလားတူ အခွအေနမြေိုးဖွဈပွီး သူသှငျးယူထားခဲ့တဲ့ ၃ဂိုးဟာ ယူရိုပါလိဂျနဲ့ ကရာဘောငျဖလားတှမှော သှငျးယူထားတာဖွဈပါတယျ။တီယာနေး အနနေဲ့ လညျးဖလားပွိုငျပှဲတှကေ ခွစှေမျးကို လိဂျပွိုငျပှဲအထိ သယျလာနိုငျရငျ ဒီဆုကို မြှျောလငျ့နိုငျတာဖွဈပါတယျ။
လကျရှိအနအေထားတှကွေောငျ့လညျး ဒီရာသီမှာစတငျခြီးမွှငျ့မယျလူငယျအကောငျးဆုံးကစားသမားဆုအတှကျ ဆနျကာတငျစာရငျးမှာ အာဆငျနယျ အသငျးသားအခြို့ကို မွငျတှရေ့ဖှယျရှိနတော ဖွဈပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တရာသီအတွင်းအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုအတွက်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဘယ်ကစားသမားတွေကမျှော်လင့်ခွင့်ရှိနေလဲ ?
ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီဟာ ရာသီတခု ပြီးဆုံး တိုင်း မှာ တရာသီအတွင်း အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု၊ တရာသီအတွင်း အကောင်းဆုံးနည်းပြဆု ၊ တရာသီအတွင်း အကောင်းဆုံး သွင်းဂိုးဆု တွေကို ချီးမြှင့် လေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုရာသီမှာ တော့ တရာသီအတွင်းအကောင်းဆုံး လူငယ်ကစားသမားဆုကို ပါစတင်ပေးအပ် ချီးမြှင့်သွားတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ လူငယ်အကောင်းဆုံး အတွက် အကျုံးဝင်တဲ့ ကစားသမား တွေကတော့ အသက် ၂၃ နှစ် နဲ့ အောက် လူငယ်ကြယ်ပွင့်လေးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆုရွေးချယ်ရာမှာတော့ ပြင်ပလူထုရဲ့ မဲပေး ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေါင်းပြီး ပေးအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသက် အရွယ်ပိုင်းအရ ခွဲခြားကန့်သတ် ချက်တွေ ကြောင့် လူငယ် တွေကို နေရာသိပ်မပေးတတ်တဲ့ အသင်းတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အသင်းသားတဦးဦး ဒီဆုကို ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက် အတော်လေးကို နည်းပါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ် အသင်းလို လူငယ်တွေ ကို ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲ တတ်တဲ့အသင်းမျိုးအတွက်တော့ ဒီဆုအတွက် အကျုံးဝင်နိုင်မယ့်လူငယ်တွေ အများအပြားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရာသီ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ နေရာ ရရှိနေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြသနေတဲ့ ဆီဘယ်လော့စ်၊တီယာနေး၊ မိတ်လန်းနိုင်းစ်၊ ဂွမ်ဒူဇီ၊ ဝီလော့ခ်၊ စမစ် ရိုဝီ၊ ရိုင်းစ်နယ်ဆင်၊ မာတီနယ်လီ၊ ဆာကာ အစရှိတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့် လေးတွေရဲ့ အသက် အရွယ် အပိုင်းအခြားက ဒီဆုအတွက် မျှော်လင့််ခွင့်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ခြွင်းချက်ပေးထားမှု အရ အခုရာသီအစပိုင်းမှာ အသက် ၂၃ အရွယ်သာရှိနေသေးတဲ့ ကစားသမားတွေအနေနဲ့ လည်းဒီဆုအတွက် အကျုံးဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းမှာတော့ ဒီစည်းမျဉ်းကြောင့် တော်ရဲယားနဲ့ ဟိုးဒင်းတုိ့ပါ ဒီဆုကို မျှော်လင့်နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ တော်ရဲယားက အသက် ၂၃နှစ်အရွယ်သာရှိနေသေးတာဖြစ်ပြီး ရာသီကုန်မှာတော့ အသက် ၂၄နှစ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးဒင်းကလည်း လက်ရှိမှာ အသက် ၂၄နှစ်အရွယ် ဖြစ်ပေမယ့် ရာသီအစတုန်းက အသက် ၂၃နှစ်သာရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ် အသင်းသားတွေကြားမှာ ဒီဆုကို အမျှော်လင့်နိုင်ဆုံး ကစားသမား အဖြစ်တော့ ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်လေး ဂွမ်ဒူဇီက ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်သစ်သားလေးဟာ ဒီရာသီအာဆင်နယ်အသင်းမှာခြေစွမ်းအပြဆုံးကစားသမားတွေထဲကတဦးဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလအတွက် အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုဆွတ်ခူးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အတွက်သွင်းဂိုး လေးဂိုးနဲ့ ဖန်တီးမှု တကြိမ်စွမ်းဆောင်ထားတဲ့ မာတီနယ်လီ ကလည်း ဒီဆုအတွက် မျှော်လင့်လို့ရနေတာဖြစ်ပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သွင်းဂိုး တဂိုးမှ မရထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆာကာကလည်း ခြေစွမ်းပြနေပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ သွင်းဂိုးတဂိုးသာပါဝင်ပတ်သက်ထားနိုင်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဝီလော့ခ်ကလည်း အလားတူ အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီး သူသွင်းယူထားခဲ့တဲ့ ၃ဂိုးဟာ ယူရိုပါလိဂ်နဲ့ ကရာဘောင်ဖလားတွေမှာ သွင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။တီယာနေး အနေနဲ့ လည်းဖလားပြိုင်ပွဲတွေက ခြေစွမ်းကို လိဂ်ပြိုင်ပွဲအထိ သယ်လာနိုင်ရင် ဒီဆုကို မျှော်လင့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့်လည်း ဒီရာသီမှာစတင်ချီးမြှင့်မယ်လူငယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုအတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ အာဆင်နယ် အသင်းသားအချို့ကို မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။